Ny famerenana ny 'Firestarter' an'i Stephen King dia nahazo naoty R tao amin'ny Blumhouse
Home Vaovao Mahafaly Fialam-boly Ny famerenana ny 'Firestarter' an'i Stephen King dia nahazo naoty R tao amin'ny Blumhouse
Manantena izahay fa ny Prodigy no hanao ny feon-kira.
by Trey Hilburn III Janoary 12, 2022 3,695 hevitra
Stephen King's Firestarter dia miverina amin'ny alàlan'ny reboot ao amin'ny Blumouse. Nahita fampifanarahana teo amin'ny efijery farany izahay Firestarter Niverina tamin'ny 1984. Io fampifanarahana io dia nahitana an'i David Keith sy Drew Barrymore tanora. Ny sarimihetsika notarihin'i Mark L. Lester dia namela be dia be ny mpankafy ny fitaovana tany am-boalohany somary mangatsiaka. Ankehitriny, manana fanindroany indray izahay amin'ny fomba ofisialy izay voalaza fa fampifanarahana mahatoky kokoa ny asan'ny King.
Ny mpamokatra, Keith Thomas dia faly amin'ny fampifanarahana an'i Blumhouse ary nilaza fa ity iray ity dia hanana ireo zavatra mahery setra rehetra avy amin'ny bokin'ny Mpanjaka izay tsy azo nafindra tamin'ny sarimihetsika tamin'ny fiandohan'ny taona 1980. Ny zavatra toy ny olona dorana velona dia miforona ao anatiny sy ny toy izany.
The Firestarter reboot dia efa nahazo naoty R noho ny herisetra tafahoatra.
Ny famintinana ny sarimihetsika 1984 dia toy izao:
Tovovavy iray izay mampivelatra fahaiza-manao pyrokinetic ary nalain'ny sampan-draharaham-panjakana miafina izay te hampiasa ny fanomezam-pahasoavana mahery ananany ho fitaovam-piadiana.
Blumhouse's Firestarter kintan'ny adaptation Ryan Kiera Armstrong, Charlie McGee, Zac Efron, Andy, Sydney Lemmon, Michael Greyeyes ary Gloria Reuben. Ankoatry ny Mamono ny Halloween mpanoratra Scott Teems no hanoratra ity fampifanarahana ity.
Faly ve ianao amin'ny Blumhouse Firestarter reboot?